I-Tranquil Tatamagouche Indlu encinci-I-Off-Grid - I-Airbnb
I-Tranquil Tatamagouche Indlu encinci-I-Off-Grid
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguLil
Uya kuziva ukhululekile ngoko nangoko xa utsalela 'kwiNdawo yeJules'-ikhaya elincinci elingaphandle kwegridi elibekwe eBalmoral Brook kwingingqi entle yaseNova Scotia yaseTatamagouche.
Le yikhabhathi enegumbi elinye eyodwa nezolileyo enomgangatho ukuya kwiifestile zesilingi ezijonge kumlanjana onyakazelayo ongqongwe ngamahlathi kunye nezilwanyana zasendle. Buyela kuwe kunye nendalo kule ndawo yoxolo kwaye wonwabele ixesha lakho apha uwedwa okanye kunye nenkampani.
KUBALULEKILEYO - le ndawo ayinawo umbane okanye amanzi abalekayo. Kukho isitovu sepropane sokupheka, isitovu senkuni sokufudumeza, iitotshi zezibane kunye nendlu yangaphandle… uyazi kakuhle.
Igumbi lokuhlambela ngaphakathi - kwezo mfuno zokuhlambela zasebusuku kakhulu kukho indlu yangasese enebhakethi esuswayo onokuyisebenzisa ukuze ungadingi ukuya kwindlu yangaphandle ebusuku.
-phumla kwaye wonwabele indawo entle
- funda incwadi kwisitulo esipholileyo
-camngca okanye uziqhelanise neyoga kwiveranda evaliweyo
- hamba ngeendlela ezininzi kwindawo
- Songa ukuya kwiglasi yewayini ngaseziko langaphakathi
-yosa iimarshmallows kumlilo wangaphandle
- pheka isidlo sakho esilula kwisitovu sepropane
- jonga iinkwenkwezi ngaphandle kokunye ukukhanya esibhakabhakeni
- cela ukhenketho lwefama kwifama yethu yendalo esendle nje
-phonononga zonke ii-adventures ezinkulu ezifumaneka kwindawo.
Ikhabhini ibonelelwa ngamanzi okucoca, isitovu sepropane, kunye nesipholisi somkhenkce wakho kunye nezinto eziza kugcinwa zibandayo. Kukho isitovu seenkuni sokufudumeza kunye namakhandlela amaninzi kunye nezibane zokukhanya ngexesha langokuhlwa. Ayikho ishawa kodwa iindwendwe ezininzi ziyakonwabela ukuphola kwindawo ebhibhidlayo kunye nendlu yangaphandle inokufunyanwa kude kufuphi nepropathi. Uya kuyonwabela le propati kangangokuba awuyi kuqaphela nokuba akukho mbane okanye iilaptop okanye iiselfowuni. Kuvakala kumnandi, eh?
Zonke iilinen kunye neetawuli zokuhlambela
Zonke iitafile zetafile kunye neflatware
Zonke izixhobo zasekhitshini
Bodum french press ukwenzela ikofu
Umlambo onokufikelela kuwo kwaye uzipholise kuwo
Nceda uqaphele ukuba kukho kuphela inkonzo yeselula ejikeleze indawo kwaye ayikho kwikhabhini.
Ibhedi yobukhulu bendlovukazi ikhululekile kakhulu kwaye ikufuphi nomlilo wokufudumala kwiinyanga ezipholileyo. Wamkelekile ukuba uze nomandlalo womoya ukuze ulale abantu ababini abongezelelweyo.
Ifakwe kwimizuzu eli-10 ukusuka edolophini iTatamagouche kunye nemizuzu eli-120 ukusuka eHalifax le yindawo entle yokuhlala kuye nabani na ofuna ukufumana iR&R encinci nokuba eyedwa okanye nomhlobo. Abantwana nezilwanyana zasekhaya zamkelwe.
I-Tatamagouche yindawo encinci entle yabantu abadala kunye nabantwana ngokufanayo. I-Sugarmoon i-maple syrup hut ngamava amnandi, kwaye i-Tatamagouche Brewery okanye i-Jost Winery yindawo ekhuthazwayo yokumisa. Iingxangxasi zalapha zikufanele ukutyelelwa kananjalo kwaye kukho iilwandle ezintle eziya kuMlambo uJohn. Kukwakho nebala legalufa elincinci kwaye uqiniseke ukuba umisa kwi-Balmoral Falls kwindlela enye nekhabhathi. IMarike yamaFama edolophini kunye neSikhululo sikaloliwe saseCafé izisa abahambi abasuka mbombo zonke. Ndicela ubuze ngazo zonke izinto ezimnandi ozenzayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Lil